‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अधिकार खारेज गर्नुपर्छ’ : डा. शर्मा - NewsCenterNepal.com
काठमाडौं-संघीयताका अध्येता तथा संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले अहिले देशमा संघीयताको कुरा गर्दा पाँच तहजस्तो देखिएको बताएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,‘संघीयताको अहिले संंविधानबमोजिमको जुन संरचना छ, त्यो संरचना अहिले काममा आईरहेको छैन । अहिले म विशेषगरी प्रधानमन्त्रीज्युलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो तीन तहको संघीय संरचना संविधानमा छ । तर, व्यवहारमा चार÷पाँच तहकोजस्तो देखियो । किनभने स्थानीय तह, त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश, केन्द्र गर्दा अहिले पाँच तहकोजस्तो देखियो ।’ प्रस्तुत छ डा. शर्मासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मैले के पाएँ भन्नुहुुन्छ भने यो संघीयताको अहिले संंविधानबमोजिमको जुन संरचना छ, त्यो संरचना अहिले काममा आईरहेको छैन । अहिले म विशेषगरी प्रधानमन्त्रीज्युलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो तीन तहको संघीय संरचना संविधानमा छ । तर, व्यवहारमा चार/पाँच तहकोजस्तो देखियो ।
किनभने स्थानीय तह, त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश, केन्द्र गर्दा अहिले पाँच तहकोजस्तो देखियो । त्यसकारण यो संविधानसँग मिल्दैन् । संविधानसँग मिल्ने खालको संघीय संरचना हामीले चलाउनुपर्छ ।
अब यो संविधानविपरीत गर्नपनि हुँदैन । त्यसकारणले आज विजया दशमीको यो दशैँको अवसरमा शुभकामनासहित म प्रधानमन्त्रीज्युलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईँ यो पाँच तहको संघीय संरचना, यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको संघीय संरचनाबाट तपाईँ समृद्धिमा पुग्न सक्नुहुन्न । तपाईँ त यो ७७ वटै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई तपाईँ खारेज गर्नुहोस् । यो मेरो दशकाँै, धेरै वर्षको अध्ययनको निश्कर्ष हो ।
किन बाधक भए भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण अधिकार अहिले स्रोत, साधन सबै अहिले सि.डि.ओ. को नियन्त्रणमा छ जसलाई संविधानले पहिचान गर्दैन । अहिले तीन तहको संघीय संरचनाले पहिचान गर्दैन । संविधानले पहिचान नगरेकोमा अधिकार छ, अब संविधानबमोजिम हामीले कल्पना गरेको, बनाएको यो तीन तहको संरचनामा अधिकार छैन ।
अर्को कुरा, संविधानमा के लेखेको छ भने यो संरचना संविधानसँग मेल नखाने, यस्ता खालका संरचनाहरू यो संघीय संसदको चुनाव भएको र संसदको अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्वतः अमान्य भनिएको छ । त्यसकारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जुन अहिले व्यवस्था छ, यस्तो व्यवस्था र जिल्ला समन्वय समितिले त्यही काम गरिरहेको छ, यी कुराहरू संविधानबमोजिम स्वतः अमान्य भईसके । यस्ता स्वतः खारेज हुनुपर्ने कुरा हो ।
अदालत म किन गएको भन्नुहुन्छ भने संविधानको पालना होस्, संविधानबमोजिम यो संविधानले पहिचान नगर्ने संरचना प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल खारेज गरियोस् अनि यो खारेज गरिसकेपछि के हुन्छ भने जनताको मौलिक हकको कार्यान्वयन गरियोस् । मानवअधिकारको कार्यान्वयन गरियोस् । मानवअधिकार, मौलिक हकको समाचार र विकास, समृद्धिको कुरा भईरहेको छ, समग्रमा प्रशासन, मुलुक नै अल्मलिएको छ । दुईतिहाईको सरकार अल्मलिएको छ ।
यो अल्मलिएको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने समृद्धि यात्रा सुरु नै हुन सकेन । किन सुरु हुन सकेन ? भनेदेखि संविधानले जुन बाटोमा देखाएको छ, त्यो बाटोमा नहिँडेर हो नि त । बाटो के हो भन्नुहुन्छ भने तीन तहको संरचना हो नि त । तीन तहको नै उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँले पाँच तहको बनाईदिनुभयो ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानबमोजिम नै यो संसद सुरु भएको एक वर्षभित्र स्वत ः यो अमान्य भईसकेको छ । त्यसकारण अमान्य भईसकेको कुरालाई नोटमा लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरचनालाई तत्काल खारेज गर्नुहोस् र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि संविधानबमोजिम बनाउनुहोस् । त्यो भयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो संविधानले अंगिकार गरेको तीन तहमा सरचना हुन्छ । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीज्यु यो संघीयताको यात्रामा एउटा ठीक बाटोमा हुन्छ । नभएदेखि यो समृद्धिको यात्रा, मानवअधिकार र मौलिक हकको संरक्षण यो गर्न सकिँदैन । यो मेरो लामो अध्ययनको निष्कर्ष हो ।
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संघीयताका अध्येता तथा संविधानविद् डा। रुद्र शर्माको कुराकानी जस्ताको तस्तै साभार गरीएको छ ।
वीरगञ्जबाट १७ करोडभन्दा बढी मूल्यको २३ किलो सुन बरामद
पूर्वराजाद्वारा यसपालि दशैँटीका प्रदान र शक्तिपीठहरूकाे दर्शन नहुने